Ny fiposahan'ny masoandro angamba no kalandrie efa misy | Androidsis
Sunrise dia kalandrie tsara sy voatahiry tsara ho an'ny Android sy ny tranonkala
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, fiarovana, Tutorials
Raha tsy maintsy manonona kalandrie izay novolavolaina fatratra amin'ny lafiny fampiasana sy ny endrika, azo antoka fa hiseho aminao izany haingana ao an-tsainao Cal. Kalandrie iray izay nanalavitra dingana iray teo amin'ny sehatry ny fahitana madio sy ny fampandehanana lehibe nahatonga azy io ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ity Android ity. Manana safidy hafa koa isika toy ny Agenda, Kalandrie Business na Kalandrie Ankehitriny, ny tsirairay amin'izy ireo dia mankamamy ny hatsaran-toetra sasany izay tsy ananan'ny hafa.
Saingy, raha tsy maintsy miantso ny kalandrie misy ny zava-drehetra isika, dia saika tsy hahita iray raha tsy amin'ny fahatongavany, manomboka anio, ny Sunrise. Kalandrie tena tsara, izay Miavaka miavaka amin'ireo voalaza eo amin'ny fampidirana «app hoa» amin'ny Internet, satria tsy misy amin'izy ireo manana an'io fampiasa io, amin'ny farany mila mampiasa Google Kalandrie hahitantsika ny fandaharam-potoanay amin'ny solosaina.
Sunrise for Android dia manolotra fiasa marobe: fizahana ny fandaharam-potoana, fijerena isan-kerinandro sy isam-bolana, topi-maso Google Maps momba ny sarintany sy ny lalana, sary mifandraika, ny fampahalalana ny toetr'andro, ary ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Facebook sy ny hetsika. Misy koa a Widget agenda ho an'ny efijery birao izay mamela anao handamina hetsika haingana sy haingana. Fanavaozana ny fiposahan'ny masoandro amin'ny Google Calendar ary mampiasa fampiasa autocomplete mihitsy aza ho an'ny toerana misy ny hetsika.
Raha mbola afaka milaza isika fa misy izany alohan'ny iray amin'ireo kalandrie feno indrindraTsy hoe Sunrise dia tonga lafatra ihany koa, satria ny fanohanana ny Exchange sy ny takelaka dia hiseho amin'ity fahavaratra ity. Tsy misy bara fitadiavana, noho izany afaka mahita herintaona mialoha fotsiny ianao ary tsy asehon'ny fijery isam-bolana hoe andro iza no be atao.
Ny rohin'i Sunrise dia avy amin'i kalandrie.sunrise.am, na dia misy koa ny rindranasa Chrome izay miasa ivelan'ny Internet. Na dia tsy haingana toa ny Kalandrie Google aza izy io dia manana ny fiasa rehetra ananan'ny rindranasa ho an'ny finday, ary koa Tantaran'ny hetsika Foursquare na ny sary avatar an'ny mpifandray. Ny rindranasa tranonkala koa dia manana karoka hetsika sy varavarankely pop-up isan-karazany misy sarintany hanindriana ny hetsika, ary ny fahaizana mandray anjara amin'ny Google Hangouts amin'ny kalandrie iray ihany.
Endri-javatra iray izay mety tsy hainao dia ny tsy fahaizana mamorona hetsika amin'ny alàlan'ny fanoratana azy ireo toa ny hoe afaka atao ao amin'ny Google Calendar. Ho an'ny ambiny, azonao atao izany manoloana ny fampiharana kalandrie mamiratra.
Azontsika lazaina izany Sunrise no hany fampiharana kalandrie cross-platform marina, satria tsy avelan'i Google hamboarina isaky ny rindranasa ireo rehetra ampiasainao.
Ary tsy eto ihany ilay zavatra, satria ny drafitr'i Sunrise dia ny fisehoana serivisy vaovao hiditra ao amin'ny sehatra toa an'i Github na Trello hanaraka tetikasa. Na izao aza dia azonao atao ampio kalandrie mahaliana toy ny an'ny ekipanao tiana na rindran-kira an'ny vondrona mozika.
Fampiharana multiplatform tena mahaliana sy manokana azonao atao misintona azy maimaim-poana avy amin'ny widget izay ho hitanao etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Sunrise dia kalandrie tsara sy voatahiry tsara ho an'ny Android sy ny tranonkala
Ahoana ny fomba hanaovana ny Android ho toy ny Lollipop
Mitadiava finday finday avo lenta avy amin'ny telefaona namana miaraka amin'ny Android Device Manager 1.2 [APK]